दश लाख घुससहित वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत पक्राउ – YesKathmandu.com
दश लाख घुससहित वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत पक्राउ
सोमबार १७, असोज २०७३
काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँका शाखा अधिकृत रमेश लामिछानेलाई रु १० लाख घुससहित आज पक्राउ गरेको छ ।
आयोगको विशेष टोलीले शाखा अधिकृत कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा भई दर्ता गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार संस्थासँग दर्ता प्रमाणपत्र लिने प्रयोजनका लागि विभिन्न बहानामा घुस मागेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको टोलीले आज अभियुक्त लामिछानेलाई बिजुली बजारको एक रेस्टुराँबाट पक्राउ गरेको हो । घुस रकम पु¥याउने शिक्षक अनिल पौडेललाई समेत पक्राउ गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै आयोगले जिल्ला मालपोत कार्यालय सर्लाहीका नासु रामनरेश रायलाई रु १२ लाख २५ हजार घुससहित पक्राउ गरेको छ । ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं ६ का स्वबासीको जग्गा दर्ताका क्रममा प्रतिधुर रु १० हजारका दरले घुस लिँदालिँदै उनलाई थलामा नै पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्त नासु रायले घुस लिँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको बर्दिबास कार्यालयबाट गएको टोलीले आइतबार मलङ्गवा–१० पक्राउ गरेको आज जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस,
प्रहरीको फन्दामा पर्ने डरले नक्कली सर्टिफिकेटधारी आङ छिरिङ शेर्पाको दुबै छोरा राजीनामा दिएर सुइकुच्चा !
प्रेस सेन्टर राससको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
एघार नाउर र पाँच झारलको सिकार अनुमति
गर्भपतन सेवा लिने किशोरीको सङ्ख्यामा बृद्धि
मन्त्रीद्धय अर्जुननरसिंह र दीपक बोहरासँग परास्त भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
महरा र शर्मालाई दोहोर्याइएपछि नारायणकाजीको विरह :अब राजनीतिमा रहिरहनुको के अर्थ ?
भ्रष्ट्राचारको आरोपमा अख्तियारले डामेकासँग स्वास्थमन्त्री गगन थापा एउटै मञ्चमा देखिएपछि….
कांग्रेस महामन्त्री कोइराला अस्वस्थ, अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा
कमल थापाको उल्टो यात्रापछि राप्रपाकै नेताको चिन्ता अब पार्टी सिद्धियो